ပရိသတ်တွေ ကို ပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှု ပေးနိုင်မယ့် ချန်ပီယံလိဂ် ကျင်းပမယ့် ပုံစံသစ် - xyznews.co
ပရိသတ်တွေ ကို ပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှု ပေးနိုင်မယ့် ချန်ပီယံလိဂ် ကျင်းပမယ့် ပုံစံသစ်
May 11, 2022 - by Editor
UEFA တာဝန် ရှိသူတွေ ၊ ကလပ် နဲ့ လိဂ်ပြိုင်ပွဲ တာဝန်ရှိသူတွေ ဟာ ချန်ပီယံလိဂ် ကျင်းပမယ့် ပုံစံသစ် နဲ့ ပတ်သက်လို့ မနေ့က အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်ကာ သဘောတူညီမှု ရယူနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု ကျင်းပမယ့် ပုံစံသစ်ကို 2024 ခုနှစ်မှာ စတင် ကျင့်သုံးသွားမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ ပြိုင်ပွဲဝင် အသင်း အရေအတွက် ကိုလဲ 32 သင်း ကနေ 36 သင်း အထိ တိုးမြှင့်သွားခဲ့ပါတယ်။
အခု ကျင်းပမယ့် ပုံစံသစ် ကို UEFA Club Competitions Committee က သဘောတူညီမှု ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်လို့ ၊ UEFA Executive Committee က ဆက်လက် သဘောတူလိုက်တဲ့ တစ်ပြိုင်နက် တရားဝင် သက်ဝင်သွားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ ကျင်းပနေတဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲ ပုံစံက 32 သင်း ကို4သင်းအုပ်စု 8 အုပ်စု ခွဲကာ ၊ အိမ်ကွင်း အဝေးကွင်း6ပွဲ ကစားတဲ့ ပုံစံနဲ့ ကျင်းပနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်စု ပထမ နဲ့ ဒုတိယ ရတဲ့ အသင်းတွေ က ရှုံးထွက် အဆင့်ကို တက်ရောက်ခွင့် ရရှိကြတာပါ။
သို့သော် ကျင်းပမယ့် ပုံစံသစ်မှာတော့ ပရိသတ်တွေ ကို ပိုပြီး ဖျော်ဖြေမှု ရသ ပေးချင်တဲ့ အတွက် ပြိုင်ဘက် တစ်သင်းထဲကို အိမ်ကွင်း / အဝေးကွင်း နှစ်ကျော့ ကစားတဲ့ စနစ် ပါဝင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကလပ် အသင်းတွေ ဝင်ငွေ ပိုမို ရရှိစေဖို့ အတွက် အုပ်စု အဆင့်6ပွဲ ကစားရမယ့် အနေအထားကနေ 8 ပွဲ အထိ တိုးမြှင့် ကစားခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
2024 ခုနှစ် ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲ ကစလို့ အုပ်စုတွေ အမျိုးမျိုး ခွဲတော့မှာ မဟုတ်ပဲ ၊ အမှတ်ပေး ပြိုင်ပွဲ တစ်ခုတည်းလို 36 သင်း စလုံးဟာ လိဂ် ပြိုင်ပွဲ တစ်ခု အနေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ကစားကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ယှဉ်ပြိုင် ကစားတဲ့ နေရာမှာ အသင်း တစ်သင်းဟာ မတူညီတဲ့ ပြိုင်ဘက် 8 သင်း နဲ့ 8 ပွဲ ကစားရမှာပါ။ အဲဒီ 8 ပွဲမှာ4ပွဲ က အိမ်ကွင်းမှာ ကစားရမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ ကျန်တဲ့4ပွဲ က အဝေးကွင်းမှာ ကစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေ အနေနဲ့တော့ အုပ်စု အဆင့်မှာတင် ကိုယ့်အသင်းဟာ မတူညီတဲ့ အသင်း 8 သင်းနဲ့ ရင်ဆိုင် ကစားရမှာ ဖြစ်လို့ ၊ မတူညီတဲ့ ဖျော်ဖြေမှု ရသတွေ ကို ခံစားရမှာပါ။
ပွဲစဉ် 8 ပွဲစီ ကစားပြီးတာ နဲ့ အမှတ်ပေးဇယား ကို ကြည့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိပ်ဆုံး 8 နေရာမှာ ရပ်တည်တဲ့ 8 သင်းက ရှုံးထွက် အဆင့်ကို အလိုအလျှောက် တက်ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ၊ အဆင့်9ကနေ 24 အတွင်း ရပ်တည်တဲ့ အသင်းတွေ က နှစ်ကျော့ ကစားတဲ့ စနစ် နဲ့ Play-Off ကစားရမှာပါ။ အဲဒီကနေ တက်လာတဲ့ 8 သင်း + ထိပ်ဆုံး နေရာ က 8 သင်းဟာ 16 သင်း ရှုံးထွက် အဆင့်ကို စတင် ကစားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
16 သင်း ရှုံးထွက် အဆင့် ရောက်တာ နဲ့ လက်ရှိ ကျင်းပတဲ့ ပုံစံအတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားမှာပါ။
ဒီနေရာမှာ ပရိသတ်တွေ ကို သိသင့်တဲ့ အချက်က 32 သင်း ကနေ 36 သင်း တိုးမြှင့်လိုက်ချိန်မှာ ၊ တိုးလိုက်တဲ့4သင်းက ဘယ်လိုတွေ ဝင်ခွင့်ရမှာလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြဖို့ လိုမယ် ထင်ပါတယ်။ အစောပိုင်းတုန်းက ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အတိတ်တုန်းက ချန်ပီယံလိဂ် စွမ်းဆောင်ရည်တွေကြောင့် ချန်ပီယံလိဂ် တစ်နေရာစာ မျှော်လင့်ခွင့် ရတယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို ၊ ပရိသတ်တွေ က ဝိုင်းဝန်း ကန့်ကွက်တာကြောင့် UEFA ဘက်က အဲဒီ အချက်ကို ပယ်ဖျက်လိုက်ရပါတယ်။
ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောရရင် ယူနိုက်တက် လို အသင်းဟာ အတိတ်မှာ ချန်ပီယံလိဂ် စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်ခဲ့သည့်တိုင်အောင် အဆင့်4(သို့) အဆင့်5အတွင်း မရပ်တည်နိုင်ပဲနဲ့တော့ ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့် လုံး၀ မျှော်လင့်လို့ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ထပ်တိုး4နေရာ အတွက် မျှော်လင့်ချက် ရှိနိုင်တဲ့ အသင်းများ –
1. UEFA က သတ်မှတ်တဲ့ နိုင်ငံတွေ ရဲ့ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်5နေရာမှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံ က အဆင့်မြင့်ဆုံး လိဂ်ပြိုင်ပွဲက တတိယ နေရာ ရတဲ့ အသင်းဟာ တစ်နေရာစာ ရပါမယ်။ (လောလောဆယ်တော့ အဲဒီနေရာ ကို ပြင်သစ် က ရပ်တည်နေပါတယ်)
2. အဆင့်4အတွင်း ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိတဲ့ ထိပ်သီး လိဂ်ပြိုင်ပွဲတွေ က စွမ်းဆောင်ရည် အကောင်းဆုံး ပြည်တွင်းဖလား (Domestic cup) ချန်ပီယံ က တစ်နေရာစာ ရပါမယ်။
3. အခြား နှစ်နေရာကတော့ ဥရောပ ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီက ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေက ကလပ်အသင်းတွေရဲ့ စုစုပေါင်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို တွက်ချက်ပါမယ်။ အမြင့်ဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ပြသနိုင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံ2နိုင်ငံက ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့်နေရာနောက် ကလပ်လျှက် ရပ်တည်နိုင်တဲ့ အသင်း2သင်းကို ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ထိုးပြရရင် လက်ရှိ အနေအထား အရ ဆိုရင် အင်္ဂလန် နဲ့ ဟော်လန် လိဂ်က အသင်းတွေ က ဝင်ခွင့် ရမှာပါ။
အင်္ဂလန် အသင်းတွေဟာ ဒီရာသီလို ဥရောပ စာမျက်နှာမှာ ခြေစွာမယ် ဆိုရင် ပရီးမီးယားလိဂ် အဆင့်5နေရာမှာ ရပ်တည်တဲ့ အသင်းက ချန်ပီယံလိဂ် ကစားခွင့် မျှော်လင့်ချက် ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက် – UEFA ကိုယ်တိုင်က ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမယ့် အသေးစိတ် ပုံစံမျိုးကို ချပြခြင်း မရှိသေးလို့ ၊ ယေဘုယျ နားလည်အောင်ပဲ ကြိုးစား ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Previous Article ယနေ့ည လိဒ်စ်နဲ့ ပွဲမှာ အဓိက ချဲလ်ဆီး ကြယ်ပွင့် ၂ဦး ပြန်ပါနိုင်ကြောင်း အသိပေးရင်း ၊ အလွန်ဆိုနဲ့ စကားများခဲ့တဲ့ အကြောင်း ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ တူချယ်
Next Article ဂွာဒီယိုလာ နဲ့ မန်စီးတီး ကစားသမားတွေကို ရှယ်​ညှော်လိုက်တဲ့ ပတ်ထရစ် အီဗရာ